» “हिजो टाउको, फुटाउँन खोज्ने,सांसदले फेरी,भनिन् ‘अग्नी सापकोटा झोले हो, झोले नै हो” “हिजो टाउको, फुटाउँन खोज्ने,सांसदले फेरी,भनिन् ‘अग्नी सापकोटा झोले हो, झोले नै हो” – हाम्रो खबर
“हिजो टाउको, फुटाउँन खोज्ने,सांसदले फेरी,भनिन् ‘अग्नी सापकोटा झोले हो, झोले नै हो”
“सभामुख अग्नी सापकोटाको गतिविधी प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोसित भएको छ ।संसद बैठक पेलेरै अगाडी बढाएपछि एमाले सांसदहरु थप उग्र भएका छन् ।”
“हिजोको संसद बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा माथी संसदमै माइक झिकेर प्रहार गर्न खोज्ने एमाले सांसद रेखा कुमारी झाले फेरी पनि सभामुख अग्नी सापकोटालाई मुखभरीको जवाफ दिएकी छिन् ।”
“सांसद झाले सभामुख सापकोटालाई झोले नै हो भनेर गाली गरेकी छिन् एक टेलिभिजन सँगको अन्तवार्तामा सापकोटालाई झोले हो , झोले नै हो भन्दै प्रहार गरेकी छिन् । कसको झोले हो? भन्ने प्रश्नमा झाले प्रचण्डको झोले हो भन्ने जवाफ दिएकी छिन् ।”
“ह,त्या,राले अनुशासन सिकाउँनु पर्दैन भन्दै सांसद झाले आक्रोस व्यक्त गरेकी छिन् । आफैँ ज्यानमारा केसको मुद्धा खेपीरहेको मान्छेले हामीलाई सिकाउँने? भन्दै झाले उदण्डता हामीले होइन अग्नी सापकोटाले देखाएको बताइन ।”
“सभामुख सापकोटाले अधिकार खोसेको भन्दै उनले अधिकार खोसेकै कारण आफु जाइलागेको पनि बताइन् । यसमा आफुलाई कुनै पश्चात नभएको भन्दै उनले सापकोटा नसच्चिए झन कडा प्रतिकार गर्ने पनि चेतावनी दिएकी छिन् ।”
“बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि चोर बाटो बाट छिरेको भन्दै उनले आगामी दिनमा संसदमा एमाले झन कडा भएर प्रस्तुत हुने बताएकी छिन् । माइकले हान्नैको लागी आफुले तानेको तर प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेको कारण मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गरेर आफु व्याक भएको उनले सुनाइन् ।”